Khangela ukwaziwa ngokuhlelwa koLwazi
Umqu. I-6 No. 3
Umqu. I-6 No. 4-II.
Umqu. I-6 No. 5-III.
Umqu. I-6 No. 6 - IV.
Umqu. I-7 No. 1 - V.
Umqu. I-7 No. 2 - VI.
Umhlaba mithathu ujikeleze, ungena kwaye uthwale eli lizwe lokwenyama, elilelona liphantsi, kunye nokuthambeka kokuthathu.
Vol. 6 DISEMBA, 1907. 3
Eli nqaku liza kuzama ukubonisa ukuba yintoni ingqondo kunye nokunxibelelana komzimba wenyama. Iya kubonisa ulwalamano lwangoko lweengqondo kwihlabathi liphela nangaphakathi kuthi, lubonise kwaye lubonise ubukho behlabathi elinolwazi, libonisa indlela ingqondo enokuhlala ngayo isazela, kwaye kanjani, ngolwazi, ukwazi ngeConscious.
Uninzi lwendoda luya kuthi luyazi ukuba unomzimba, ukuba unobomi, iminqweno, iimvakalelo, kwaye ukuba unengqondo kwaye uyisebenzisa kwaye ucinga ngayo; kodwa ukuba ubuzwa ukuba ungubani kanye kanye ngokomzimba wakhe, bunjani ubomi bakhe, iminqweno yakhe kunye nokuziva kwakhe, ukuba ucinga ntoni, ithini ingqondo yakhe, kwaye zithini iinkqubo zomsebenzi wazo xa ecinga, ngekhe aziqiniseke ngeempendulo zakhe, kanye njengokuba uninzi lukulungele ukutsho ukuba bayazi umntu, indawo, into okanye isifundo, kodwa ukuba kuya kufuneka baxele into abayaziyo malunga nabo nendlela abayazi ngayo, baya kuba bengaqinisekanga kwiingxelo zabo. Ukuba umntu kufuneka achaze ukuba liliphi ilizwe ekwindawo yalo efanelekileyo kunye nokuba liphela, njani kwaye kutheni umhlaba uvelisa izityalo kunye nezilwanyana, yintoni ebangela imisinga yolwandle, imimoya, umlilo kunye nemikhosi yomhlaba owenza ngayo umhlaba imisebenzi, yintoni ebangela ukuhanjiswa kwebala lesizwe, ukunyuka nokuwa kwempucuko, kwaye yintoni ebangela ukuba umntu acinge, emva koko usemgangathweni, ukuba kungokokuqala ingqondo yakhe ijolise kwimibuzo enjalo.
Umntu wesilwanyana uza ehlabathini; iimeko kunye neemeko zemo yakhe zichaphazela indlela yakhe yobomi. Ngelixa ihlala iyinyama yesilwanyana, yanelisekile kukuhamba ngendlela elula ngendlela evuya-hamba-ngethamsanqa. Okoko nje imfuno yakhe yangoko yanelisekile, uthatha izinto azibonayo ngaphandle kokubuza ngonobangela wazo, kwaye uphila ubomi obuqhelekileyo besilwanyana. Kuza ixesha kwindalo yakhe apho aqala ukumangala. Uyamangalisa ezintabeni, emingxunyeni, kugquma ulwandle, ekhangela ngasemlilweni nasemandleni alo agqiba, akhangele isaqhwithi, imimoya, neendudumo, nemibane, nako konke ukulwa. Ubukela kwaye enze imimangaliso xa kutshintsha amaxesha onyaka, izityalo ezikhulayo, imibala yeentyatyambo, umangale kwiinkwenkwezi ezikhanyayo, inyanga kunye nezigaba ezitshintshayo, kwaye ubukele ilanga aze alithobe njengalowo udlulisayo ukukhanya kunye nobomi.
Amandla okumangala amtshintsha ukusuka kwisilwanyana ukuya emntwini, kuba ukumangalisa luphawu lokuqala lokuvuka kwengqondo; kodwa ingqondo kufuneka ingasoloko imangalisiwe. Inqanaba lesibini kukuzama ukuqonda kunye nokusebenzisa into yomangaliso. Xa umntu wezilwanyana wafikelela kweli nqanaba lokuzivelela kwezinto, wabukela ukuphuma kwelanga kunye namaxesha onyaka atshintshileyo, kwaye waphawula inkqubela phambili yexesha. Ngeendlela zakhe zokujonga, wafunda ukusebenzisa amaxesha ngokokuphinda ujikeleze, kwaye wancedwa kumzamo wakhe wokwazi ngabantu abathi, i-aeon ngaphambili, babegqithile kwisikolo awayefunda kuso ngelo xesha. Ukugweba ngokuchanekileyo izinto eziqhubekayo eziphindaphindiweyo zendalo, le yinto le mihla abantu abayibiza ngokuba lwazi. Ulwazi lwabo lwezinto ezinje kunye neziganeko zibonakalisiwe kwaye ziqondwa ngokuhambelana nangokuhambelana nemvakalelo.
Kuthathe iminyaka kwingqondo ukwakha kunye nokuhlakulela iimvakalelo kunye nokufumana ulwazi lwehlabathi lomzimba ngalo; kodwa ekuzuzeni ulwazi lwehlabathi ingqondo ilahlekile ulwazi lwayo, kuba imisebenzi kunye namakhono ayo iqeqeshelwe kwaye yahlengahlengiswa kwaye ngeemvakalelo kangangokuba ayikwazi ukubona nantoni na engaphumi okanye ichukumise iingqondo .
Kulu lwazi lokwenene, ingqondo eqhelekileyo imi kulwalamano olufanayo nanjengengqondo yomntu wesilwanyana kwihlabathi ngexesha lakhe. Umntu uya mihla le ukuba avukele kumhlaba wangaphakathi njengoko isilwanyana sivuselwa kulawo omhlaba wenyama. Ngexesha leminyaka yokugqibela, ingqondo yomntu idlule kwimijikelezo emininzi kunye nezigaba zophuhliso. Umntu wayenelisekile kukuzalwa, ukukhuliswa, ukuphefumla, ukutya kunye nokusela, ukwenza ishishini, ukutshata nokufa, ngethemba lezulu, kodwa akanelisekanga ngoku. Uyenza yonke le nto njengoko ebekwenza ngaphambili kwaye uza kuqhubeka esenza kwimpucuko ezayo, kodwa ingqondo yomntu ikwimeko yokuvuswa kwenye into ngaphandle kwemicimbi yobomi ye-humdrum. Ingqondo iyashukuma kwaye iphazamiseke kukungazinzi okufuna into engaphaya kwemida yamandla akho kwangoko. Le mfuno ibubungqina bokuba kunokwenzeka ukuba ingqondo yenze kwaye yazi ngakumbi kunokuba isazi. Umntu uzibuza ukuba ngubani kwaye ungubani.
Ukuzifumana ekwimeko ezithile, ekhula kwezi kwaye efundiswe ngokweminqweno yakhe, ungena eshishini, kodwa ukuba uyaqhubeka neshishini ufumanisa ukuba ishishini alizokumanelisa nangona liphumelele. Ufuna impumelelo engakumbi, ayifumane, kwaye akakoneliseki. Unokufuna uluntu kunye ne-gayties, iziyolo, amabhongo kunye nokufumana intlalo yobomi, kwaye unokufuna kwaye afumane isikhundla kunye namandla, kodwa akakoneliseki. Uphando lwenzululwazi lwanelisa ixesha elithile kuba liphendula imibuzo yengqondo malunga nokubonakala kwento kunye nemithetho elawula kwangoko imicimbi. Ingqondo inokuthi emva koko ithi iyazi, kodwa xa ifuna ukwazi unobangela wezinto, iphinda ingoneliseki. Ubugcisa banceda ingqondo ekujikelezeni kwayo kwindalo, kodwa iphelela ekungonelisekini engqondweni ngenxa yokuba intle kakhulu eyona nto ilungileyo, kokukhona inokuboniswa kwiimvakalelo. Iicawa ziphakathi koncedo olunqabileyo lolwazi, kuba nangona umxholo ungumbhalo ophantsi, uhlaziswa yitoliko ngokusebenzisa imizwa, kwaye nangona abameli bezenkolo besithi iinkolo zabo zingaphezulu kweengqondo, ziyaphikisana ibango labo ngakwimfundiso yobuThixo. edityanisiwe ngo, kwaye ngokusebenzisa iimvakalelo. Naphi na apho akhoyo umntu kwaye uphantsi kwayo nayiphi na imeko akuyo, akanakuphepha ukubuza okufanayo: Ithetha ukuthini yonke le nto-iintlungu, ulonwabo, impumelelo, ubunzima, ubuhlobo, intiyo, uthando, ingqumbo, inkanuko; ubutshinga, ubuqhetseba, inkohliso, amabhongo, izilangazelelo? Usenokuba ufumene impumelelo kwishishini, kwimfundo, kwisikhundla, kunokuba nokufunda okukhulu, kodwa ukuba uyazibuza ukuba uyazi ntoni kwinto ayifundileyo, impendulo yakhe ayonelisi. Nangona enokuba nolwazi olukhulu lwehlabathi, uyazi ukuba akazazi into awayeqale acinge ukuba uyazi. Ngokubuza ukuba konke oku kuthetha ntoni, ubonakalisa ukubakho kokungena kufezwe elinye ilizwe elikwihlabathi elibonakalayo. Kodwa umsebenzi wenziwa nzima ngokungazi kwakhe ukuba uqale njani. Oku akufuneki kuthandabuzwe ixesha elide kuba ukungena kwihlabathi elitsha kufuna ukuphuculwa kwamandla apho kunokuqondwa umhlaba omtsha. Ukuba la makhono aphuhlisiwe, umhlaba ngesele usaziwa, ungabi mtsha. Kodwa njengokuba intsha kwaye amandla okuqonda ukuba ubukho kwihlabathi elitsha kuphela kwendlela anokuthi alazi ngayo ilizwe elitsha, kufuneka aphuhlise la makhono. Oko kwenziwa ngokuzama kunye nomzamo wokusebenzisa amandla. Njengoko ingqondo ifunde ukwazi umhlaba wenyama, ngokunjalo nayo, ingqondo kufuneka ifunde ukwazi umzimba wayo wenyama, ukubumba umzimba, ubomi kunye neminqweno yayo, imigaqo engafaniyo, nanjengoko yahlukile kuyo. Ukuzama ukufunda ukuba yintoni umzimba wenyama, ingqondo iyahlulahlula-hlula ngokwasemzimbeni kwaye ke ngoku iya kuthi ikwazi ngakumbi ukwakhiwa kunye nolwakhiwo lomzimba kunye nenxalenye edlalwa ngumzimba kwaye kuya kufuneka ithathe kwixesha elizayo . Njengoko iqhubeka namava, ingqondo ifunda izifundo ezifundiswa zintlungu kunye nolonwabo lwehlabathi xa zifundisa ngomzimba wenyama, kwaye ukuzifunda ezi ziqala ukufunda ukuzichaza ukuba zahlukile emzimbeni. Kodwa kude kube emva kobomi obuninzi kunye nobudala obude iyakwazi ukuzazisa. Njengoko evuselwa kwizifundo zentlungu, uvuyo, usizi, impilo kunye nezifo, kwaye eqala ukujonga entliziyweni yakhe, umntu ufumanisa ukuba eli lizwe lihle kwaye lihlala lihleli njengoko linokubonakala, lelona lizwe linobunzima kwaye linzima kakhulu kwihlabathi liphela. ezingaphakathi kunye malunga nayo. Njengoko esenza ukuba asebenzise ingqondo yakhe, angaqonda kwaye aqonde okwenzeka ngaphakathi nangaphakathi kulo mzimba wenyama nomhlaba wakhe, njengokuba eziqonda kwaye eziqonda nezinto ezibonakalayo acinga ukuba uyazazi, kodwa yena ngokwenyani uyazi kancinci ka.
Zintathu izinto zomhlaba ezijikeleze, ezingena kwaye zithwale eli lizwe lethu lomzimba, eli elilelona liphantsi kunye nelikristale kwezi zinto zintathu. Umhlaba wenyama ubonelela sisiphumo samaxesha amakhulu njengoko sibaliwe ngokwemibono yexesha, kwaye imele iziphumo zochaphazeleko lwehlabathi elidala lwezinto ezixineneyo zomhlaba ezixineneyo ezixineneyo. Izinto kunye nezinto ezisebenza ngoku kulo mhlaba wenyama ngabameli beli lizwe langaphambili.
Iilizwe ezintathu ezandulelayo zethu zisahleli nathi kwaye bezisaziwa ngabantu bakudala njengomlilo, umoya kunye namanzi, kodwa umoya womlilo, amanzi, nomhlaba, ayizizo ezo sizaziyo ngokusetyenziswa kwamagama. Zizinto zobugqwirha eziyimigca yaphantsi kwento esiyaziyo ngala magama.
Ukuze ezihlabathi zibe lula ngokuqonda siya kuphinda sizise Umzobo 30. Imele imihlaba emine ekumele ukuba sithetha ngayo, kwiimeko zayo kunye nokuvela kwezinto, kwaye ikwabonisa izinto ezine okanye imigaqo-siseko yomntu, ngalinye lisebenze kwilizwe lakwalo, kwaye konke kusebenza ngokwasemzimbeni.
Kuzo zone, ezokuqala nezona ziphezulu emhlabeni, izinto zobugqi ezazingumlilo, ezingekacingelwa ngenzululwazi yanamhlanje, isizathu esiya kuthi sikhonjiswe kamva. Eli lizwe lokuqala laliyinto enye eyayingumlilo, kodwa eyayinezinto ezinokwenzeka kuyo yonke into eyabonakaliswayo kamva. Inqaku elinye lomlilo asiloziko le laya elivumela ukugqithisa kokubonakalayo kungabonakali, kunye nokudlula esikubiza ngokuba ngumlilo, kodwa bekukho, kwaye kusekho, lilizwe elingaphaya kokuqonda kwethu uhlobo okanye izinto . Isimo sayo kukuphefumla kwaye imelwe ngumqondiso womhlaza (♋︎) ngaphakathi Umzobo 30. Umphefumlo, umoya, wawunakho ukubakho kuzo zonke izinto kwaye wabizwa kwaye ubizwa ngokuba ngumlilo kuba amandla ahamba kuyo yonke imizimba. Kodwa umlilo esithetha ngawo asilo lidangatye elivuthayo okanye elikhanyisela umhlaba wethu.
Ngexesha lokuqunjelwa, umlilo, okanye umhlaba wokuphefumla, ungene ngaphakathi kuwo, kwaye kwabizwa ukubakho kobomi behlabathi, obumelwe ngumfanekiso ngophawu we-leo (♌︎), ubomi, into yomlingo obuluomoya. Kwakukho ngoko ke ubomi behlabathi, element of umoya, ujikelezwe kwaye uphethwe ngumphefumlo womoya, nto leyo ingumlilo. Ubomi behlabathi buqikelelwe kulo kwaye iithiyori ziye zaqhubela phambili ngenzululwazi yanamhla, nangona ithiyori malunga nokuba bubuphi ubomi obungazange banelise kwizazi. Kusenokwenzeka, nangona kunjalo, ukuba zichanekile kuninzi lweengqikelelo zabo. Ukutyhutyha, okukhoyo, ngokuphefumla, kubonakalisa izinto ezimbini zokomoya kwihlabathi lobomi, kwaye oku kubonakaliswa yinto yomoya. Izinto zomoya-yinto yento yokusebenza komoya kubomi behlabathi, i-leo (♌︎); Kukuba izazinzulu zisebenzisane nazo kwiingcamango zazo zentsingiselo. Inkcazo yesayensi yeatom ibe yile: indawo ezincinci ezinokuqikelelwa ezinokuthi zingene ekumiselweni kwesimo molekyuli okanye zithathe inxaxheba ekuphenduleni kwemichiza, oko kukuthi, isuntswana lomcimbi ongenako ukwahlulahlulwa. Le nkcazo iya kuphendula ngokubonakaliswa kwezinto kwilizwe lobomi (♌︎), esilibiza ngokuba yinto yomoya. Umcimbi, womoya, i-atom, isuntswana elingabonakaliyo, aluphantsi kovavanyo lweemvakalelo ezibonakalayo, nangona inokubonwa ngokucinga ngumntu onokwazi ukubona ingcinga, njengoko ukucinga (♐︎) kwelinye icala, kwindalo Umdiza wento yomoya, obu bomi (♌︎), icala lokucaphukisa, iingcinga zobomi (♌︎-♐︎), njengoko izakubonwa kwi Umzobo 30. Ekuphuhlisweni kamva kovavanyo lwesayensi kunye noqikelelo, kucingelwa ukuba i-atom ayizange ibonakale emva kwayo yonke loo nto, kuba inokwahlulwahlulwahlulwahlulwa kaninzi, icandelo ngalinye elinokuthi liphinde lahlulwe; kodwa konke oku kungqina ukuba umxholo wokuvavanywa kwabo kunye nethiyori yayingeyi-atom, kodwa kubaluleke kakhulu kunobunzima kuneatom yangempela, engabonakaliyo. Yiyo le atomic spirit-nto engumbandela wehlabathi wobomi, into leyo esetyenziswa kwizinto zobugqi eyaziwa ngabadala njengomoya.
Njengomjikelezo wokungasebenzi kakuhle, umhlaba wobomi, i-leo (♌︎), ulungelelwaniso lwaze lwawahlula onke amasuntsu omoya okanye ii-atom, kwaye obu bumdaka kunye nokubengezela ngoku kuthiwa njenge-astral. Le-astral yehlabathi yefom, efanekiselwe ngumqondiso virgo (♍︎), ifom. Ifom, okanye ilizwe le-astral liqukethe iifom eziqinisekileyo, ezi, kunye nalapho ilizwe elakhiweyo lakhiwa khona. Into yomhlaba yefom ngamanzi, kodwa ingengawo amanzi adityaniswa kwezinto ezimbini ezibonakalayo ezo zibizwa zii-physics. Eli lizwe le-astral, okanye lehlabathi, lihlabathi, apho oososayensi, bephazama ngobomi bezinto zeatom. I, i-astral form yehlabathi, idityaniswa yento yemolekyuli kwaye ayibonakali ngamehlo, efunyanwa kukungcungcutheka ngokwasemzimbeni kuphela; ingaphakathi, kwaye idibanisa zonke iintlobo, ngokokuma kwazo, ukuba ngumzimba.
Kwaye okokugqibela sinelizwe lethu lomzimba elimelwe luphawu lwebra (♎︎). Into yobugqi bomhlaba wethu wenyama yayisaziwa kubantu bakudala njengomhlaba; ayisiwo umhlaba esiwaziyo, kodwa ngowomhlaba ongabonakaliyo obanjelwe kumhlaba wefomathi ye-astral, kwaye ungunobangela wokusala kunye kwamasuntswana ento kunye nokuvela kwawo njengomhlaba obonakalayo. Ke ngoko, kumhlaba wethu obonakalayo obonakalayo, sinokuqala, umhlaba we-astral (♎︎), emva koko yifomathi ye-astral (♍︎), izinto ke ezo zidityaniswa, obu bubomi (♌︎), ukudonsa kwezi zinto zombini, kunye nomoya (♋︎), esingomlilo wehlabathi kwaye oxhasa ugcine zonke izinto zihamba rhoqo.
Kwilizwe lethu lomzimba zigxile kumandla nezinto zeli lizwe, kwaye lilungelo lethu ukuza nolwazi kunye nokusebenzisa ezi zinto ukuba siyafuna. Ngokwayo, umhlaba obonakalayo yigobolondo eliqhekezayo, isithunzi esingenamabala, ukuba siyabonakala okanye siziqonda ngokwaso, njengoko sibonwa emva kwentlungu kunye nosizi kunye nosizi kunye nenkxwaleko ikhuphe ubuqaqawuli beemvakalelo kwaye yanyanzela ingqondo ukuba ibone. ulize lwehlabathi. Oku kuza xa ingqondo ifuna kunye nokuphelisa abaphikisi babo. Ezi zihambile, kwaye akukho nto inokuthatha indawo yazo, umhlaba uphulukana nawo wonke umbala kunye nobuhle kwaye ube yintlango ebharhileyo.
Xa ingqondo ifika kweli lizwe, apho yonke imibala iphumileyo ebomini kunye nobomi ngokwabo bubonakala ngathi abunanjongo ngaphandle kokuba buvelise usizi, ukufa kungekudala kulandela ngaphandle kokuba kwenzeke isiganeko esithile esiya kuyiphosa ingqondo ngokwakho okanye sivuse kuyo imvakalelo ethile yovelwano, okanye ukubonisa injongo ethile kokubandezeleka. Xa oku kusenzeka, ubomi butshintshiwe buvela kwizinto ebezikho ngaphambili, kwaye ngokwesikhanyiso esitsha esibuyileyo, siyaliguqula ilizwe kunye nalo. Ke loo nto ngaphandle kombala ithatha imibala emitsha kwaye ubomi buqala kwakhona. Yonke into nezinto zonke ezisehlabathini zinentsingiselo eyahlukileyo kunangaphambili. Kukho okugcweleyo koko bekubonakala kungenanto ngaphambili. Ikamva libonakala libambe amathemba amatsha kunye neenjongo ezibonakala zikhokelela kwimimandla emitsha kunye naphezulu yokucinga kunye nenjongo.
In Umzobo 30, omathathu la mazwe aboniswe ngamadoda awo emi kwindawo yesine kunye neyona iphantsi, umzimba wenyama, kumqondiso we-libra (♎︎). Indoda yenyama ye-libra, ngokwesondo, inqunyelwe kwihlabathi le-virgo-scorpio (♍︎-♏︎), ifom-umnqweno. Xa ingqondo ithatha indawo yokuba ngumzimba wenyama kunye nokuziva kwayo, izama ukumisela wonke umhlaba wamadoda awo ahlukeneyo emzimbeni wenyama kwaye isebenze ngokusebenzisa amandla ayo, olo luluhlu lomzimba wayo okhokelela emzimbeni umhlaba; ukuze inxibelelane nawo onke amandla ayo kunye nezinto ezinokwenzeka kumhlaba wenyama wedwa, kwaye ngaloo ndlela kuvala ukukhanya okuvela kwihlabathi liphezulu. Ubume bendalo yomntu, ke, ayenzi, okanye ayiyi kukhulelwa, nangayiphi na into ephezulu kunobomi bayo bokwenyama kweli lizwe lokubonakalayo. Kuya kukhunjulwa kakuhle ukuba sifikelele kwelona xesha liphantsi kakhulu lokuzibandakanya kwilizwe lomzimba kunye nesondo, i-libra (♎︎), ukuba ivele ngokuphefumla, okanye emhlabeni womlilo, okhethwe ngumhlaza womqondiso (♋︎), ukuphefumla, ukudibanisa kunye nokwakhiwa kumqondiso we-leo (♌︎), ubomi, ukubekeka kunye nokwenziwa kwimilo yophawu lwe-virgo (♍︎), uhlobo, kunye nokuzalelwa kumqondiso we-libra (♎︎), isondo.
Umhlaba ovuthayo womoya sisiqalo sokukhula kwengqondo kwi-zodiac epheleleyo; Kukuqala kokudibana kwengqondo ye-nascent yeyona nto iphakamileyo, umntu wokomoya, owayeqalele kwi-zodiac yendoda yokomoya e-aries (♈︎), wehla nge-taurus (♉︎) kunye ne-gemini (♊︎) kumhlaza womqondiso ( ♋︎), zodiac yokomoya, ekwindiza yomqondiso ii-leo (♌︎) zodiac epheleleyo. Olu phawu (i-♌︎), ubomi, be-zodiac ngokupheleleyo ngumhlaza (♋︎), ukuphefumla, kwe-zodiac yokomoya, kwaye sisiqalo sokufakwa kwe-zodiac yengqondo; Oku kuqala kumqondiso we-aries (♈︎), we-zodiac yengqondo, kubandakanya isondo (♉︎) yomhlaza (♋︎) we-zodiac yengqondo, obu bubomi, i-leo (♌︎), ye-zodiac yokomoya, kwaye ukusuka ezantsi ukuya uphawu lwe-leo (♌︎), lwe-zodiac yengqondo, ekwindiza yentsholongwane (♍︎), uhlobo, lwe-zodiac olupheleleyo, kwindiza yomhlaza (♋︎), ye-zodiac yengqondo, kunye nomda we-zodiac ebonakalayo njengoko iphawulwe luphawu aries (♈︎), lomntu wenyama kunye ne-zodiac.
Kudala imbali yomntu, ingqondo yomntu yambekelwa kwimo yomntu, elungiselelwe ukuyifumana; isaluphawu lophawu olufanayo, inqanaba, inqanaba lokuphuhlisa kunye nokuzalwa, ukuze iqhubeke iphinde yazalwe ngokutsha kubudala bethu. Okwangoku kunzima ukulandela iingxaki ezibandakanyeka kumzimba wenyama, kodwa ukuqhubeka kwengcinga kumadoda amane kunye ne-zodiacs zazo ngaphakathi kwe-zodiac epheleleyo, njengoko kubonisiwe ku Umzobo 30, Uya kutyhila iinyani ezininzi eziboniswe emfanekisweni.
Ukuvela kwengqondo yomntu kunye nemizimba esetyenziselwe ukubandakanyeka emzimbeni wakhe, yaqala ukusuka emzimbeni, njengoko kubonisiwe libra (♎︎), isondo, umzimba wenyama. Indaleko iyaqhubeka, kuqala ngomnqweno, njengoko iphawulwe luphawu lwesophawu (♏︎), umnqweno, we-zodiac epheleleyo. Kuya kubonakala ukuba olu phawu lwesoph ((♏︎) lwe-zodiac egqibeleleyo, luyinkqubo edibanisa kunye kwicala elingafaniyo lesibonakaliso virgo (♍︎), ifom. Le ndiza, i-virgo-scorpio (♍︎-♏︎), ye-zodiac egqibeleleyo, igqitha kwindiza yeengcinga zobomi, i-leo-sagittary (♌︎-♐︎), ye-zodiac yengqondo, eyayi-cancer cancer, capricorn, Ubunye (♋︎-♑︎), zodiac yengqondo, ongumda nomda wendoda ebonakalayo kunye ne-zodiac yakhe. Kuyenzeka ke, ngenxa yokuthintelwa emzimbeni wemizimba elihambelanayo, izinto kunye namandla abo ehlabathi ahlukeneyo, ukuze umntu wenyama azalwe njengomzimba wenyama; Isizathu sokuba acinge kwaye azicingele njengomzimba wenyama wokucinga kungenxa yokuba intloko yakhe ichukumisa umdiza we-leo-sagittary (♌︎-♐︎), ukucinga ngobomi, bendalo yengqondo, kunye nomdiza Umhlaza-capricorn (♋︎-♑︎), umoya-wedwa, we-psychology zodiac; kodwa konke oku kunqunyelwe kwindiza yefomati-yento, i-virgo-scorpio (♍︎-♏︎), ye-zodiac epheleleyo. Ngenxa yamandla akhe engqondo, umntu wenyama uyakwazi, ke ngoko, ukuhlala kwisoph re Scorpio (♏︎), umnqweno kunye nokuqonda umhlaba kunye neendlela zomhlaba, umdiza wentsholongwane (♍︎), uhlobo, kodwa ngelixa uhlala kule asayine kwaye azithintele ngokwakhe kwiingcinga zakhe kwindiza ye-leo-sagittary (♌︎-♐︎), yehlabathi lengqondo, okanye i-zodiac, akaboni ngaphezulu kweefomathi ezibonakalayo kunye nobomi kunye nokucinga kwehlabathi lakhe lengqondo njengoko limelwe yi Ukuphefumla kunye nobuntu bakhe obuchwephesha ngokwasemzimbeni, ngokomzimba wakhe obonakalayo kwi-libra (♎︎). Esi sisilwanyana esikhe sathetha ngaso.
Ngoku, xa umntu wesilwanyana ngokungqongqo, nokuba ukwimeko yokuqala, okanye kubomi obuphucukileyo, uqala ukuzibuza ngemfihlakalo yobomi kwaye achaze izizathu ezinokubakho zento ayibonayo, uye waqhekeza iqokobhe lobzimba bakhe I-zodiac kunye nehlabathi kwaye yandise ingqondo yakhe ukusuka kwinyama ukuya kwi-psychic world; emva koko ukukhula kwendoda yakhe ye-psychic kuqala. Oku kubonisiwe kwisimboli sethu. Iphawulwe yi-aries (♈︎) yendoda ebonakalayo kwi-zodiac yayo, ekwindiza yomhlaza-we-capricorn (♋︎-of) wendoda yengqondo, kunye ne-leo-sagittary (♌︎-♐︎), iingcinga zobomi, zika indoda yengqondo. Ukusebenza ukusuka kumqondiso we-capricorn (♑︎), ongumda wendoda ebonakalayo, uphakama aye phezulu kwi-zodiac kwihlabathi le-psychic kwaye adlule kwizigaba kunye neempawu ze-aquarius (♒︎), umphefumlo, iipisces (♓︎), ukuya ku-aries (♈︎), ingqondo, kwimo yeengqondo, ekwindiza yomhlaza-capricorn (♋︎ – ♑︎), ukuphefumla umntu, yendoda yengqondo kunye ne-leo-sagittary (♌︎-♐︎), ukucinga ngobomi, zodiac yokomoya. Indoda yengqondo inokuphuhla, ke ngoko, ngaphakathi nangomzimba wenyama kwaye, ngeengcinga nangezenzo zayo, inike umxholo kwaye ibeke izicwangciso zophuhliso oluqhubekayo, oluqala kwimbonakalo yomqondiso (♑︎) we-zodiac yengqondo kwaye yandise. phezulu phezulu ngemiqondiso ye-aquarius, umphefumlo, iipisces, ziya, ku-aries (♈︎), yendoda yengqondo kunye ne-zodiac yakhe. Ngoku ukwipaneli yomhlaza womdiza-capricorn (♋︎-♑︎), umntu obuza ukuphefumla, we-zodiac yokomoya, nayo le ndiza eyi-sagittary (♌︎-♐︎), ukucinga ngobomi, bendalo epheleleyo zodiac.
Kuyenzeka ukuba umntu, xa sele ephuhlise ingqondo yakhe kwi-zodiac yengqondo, ukuqonda ngengqondo ngobomi kunye nengcinga yehlabathi. Lo ngumda kunye nomda womda wendoda yesayensi. Unokuphakama ngokukhula kwakhe ngokwengqondo ukuya kwiplanethi yengcinga yehlabathi, ebubodwa bomntu wengqondo, kwaye aqikelele ngomphefumlo kunye nobomi bendiza efanayo. Ukuba, nangona kunjalo, umntu wengqondo akafanele ukuzinqanda ngeengcinga zakhe kwi-zodiac engqongqo yengqondo, kodwa ukuba azame ukuphakama ngaphezulu kwayo, uya kuqala kumda wendiza kwaye asayine apho asebenza khona, eyi capricorn (♑︎ ) ye-zodiac yakhe yokomoya, kwaye iphakame ngemiqondiso ye-aquarius (♒︎), umphefumlo, iipisces (♓︎), uya, ku-aries (♈︎), ukwazi, okukuko ukukhula komntu ngokomoya ngokomoya we-zodiac yakhe, eyolulayo kunye Ibotshelelwe ngumhlaza womdiza-capricorn (♋︎-♑︎) umntu ngamnye iphefumlo, ofumene isodiya ngokupheleleyo. Oku ukuphakama kokufikelela kunye nokuphuhliswa kwengqondo ngomzimba wenyama. Xa oku kufikelelwe, ukungafi komntu kuyinyani eqinisekileyo kunye nenyani; Ngekhe iphinde, phantsi kwazo naziphi na iimeko okanye imeko, iya kuthi ingqondo, esele ifumene, ingaphumli engqondweni ukuba iqhubeke ingazi ngokuqhubekayo.
Kwisihleli sokugqibela esithi "Lala," amagama athi "izicubu ezizimeleyo kunye neeradi" asetyenziswa ngokungazi. Izihlunu ezisetyenziswa xa uvuka kwaye ulele ziyafana, kodwa xa ulele ubuthongo, imizimba ibangelwa yinkqubo enovelwano enovelwano, ngelixa imeko ivuswa yimeko yenkqubo ye-cerebro-spinal neva . Le ngcinga igcina ilungile kuyo yonke ingqokelela yohlelo "Ukulala."